Shinbiro loo tabbarayo inay haash sigaarka ka ururiyaan jidadka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Shinbiro loo tabbarayo inay haash sigaarka ka ururiyaan jidadka.
Shinbiro loo tabbarayo inay haash sigaarka ka ururiyaan jidadka.
Posted by: radio himilo October 10, 2017
Muqdisho – Ka fal-celinta tirada badan ee sigaarrada lacabo ee Amsterdam, laba farsamayaqaan ayaa la yimid qorshe Tukaha loogu tababbarayo ururinta haashashka lagu tuuro jidadka.
Previous: Haween ku xayirmay garoon markii wejigooda laga aqoonsan waayay sawirrada dal-ku-galka.
Next: 10 faa’iido oo laga helo cunista Tufaaxa.